==လူထုကျန်းမာရေး( "သွား " များ ဖြူဝင်းစေရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု)==
အခုတင်မယ့် သွားများ ဖြူဝင်းစေတဲ့ နည်းလမ်းကို တစ်ချို့ သူငယ်ချင်းများလည်း သိချင်သိမှာပါ ။. မသိတဲ့ သူငယ်ချင်းများလည်း ရှိမှာပါ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံး ဗဟုသုတ ရစေတာပေ့ါနော် ။သွားများဖြူဝင်းစေဖို့ သီးမွှေး ဌက်ပျောသီးလေးက စွမ်းဆောင်ပေးမှာပါ။ - သီးမွှေးဌက်ပျောသီးလေး တစ်လုံးကို အခွံနွှာလိုက်ပါ - အသားကိုတော့ စားလိုက်ပေ့ါနော် ။…… - အခွံကို မပစ်လိုက်ပါနှင့် . ။သွားများဖြူဝင်းစေဖို့ အခွံလေးက စွမ်းဆောင်ပေးမှာပါ ။- သီးမွှေးဌက်ပျောသီး အထဲက အခွံနှင့် သွားများအားလုံးကို ပွတ်တိုက်ပေးလိုက်ပါ - ပွတ်တိုက်ပြီးတာနှင့် တစ်ရှုးလေးနှင့် စင်ကြယ်အောင် သုတ်ပေးလိုက်တာနှင့် ဖြူဝင်းနေတဲ့သွားများကို သင်တွေ့လိုက်ရပါမယ် - ဒီနည်းလေးကတော့ အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းလေး တစ်ခုပါ - ပြီးတော့ သင့်အတွက်လည်း မပင်ပန်းစေမယ့် နည်းလမ်းလေးပါ - နေ့တိုင်းမဟုတ်သည့်တိုင် တစ်ပတ်ကို
၄ ရက်လောက် တိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ -
+ရဲတေဇကျော်+